200/250/300 / 350mA 12W CC ကို 1-10V ယာဉ်မောင်း - တရုတ်ရှန်ဟိုင်း Euchips စက်မှုဇုန်
200/250/300 / 350mA 12W CC ကို 1-10V
200/250/300 / 350mA 12W CC ကို 1-10V ယာဉ်မောင်း
item အဘယ်သူမျှမ .: EUP12A-1HMC-1
input ဗို့အား VAC: 220-240
output လက်ရှိ VAC: 200/250/300 / 350mA * 1CH
output ဗို့အား VAC: 9-40
output ပါဝါ W: 12
: Mode ကိုမှိန် 1-10V / PWM
Size ကိုမီလီမီတာ: 150 * 43 * 29
200/250/300 / 350mA 12W constant လက်ရှိ 1-10V ယာဉ်မောင်း EUP12A-1HMC-1
EUP12A-1HMC-1 ယာဉ်မောင်း LED တစ်ဦးစဉ်ဆက်မပြတ်လက်ရှိ output ကို mode ကိုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ output ကိုလက်ရှိအလွယ်တကူ DIP switch ကိုမှတဆင့်သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်, ထိုကားမောင်းသူဟာချောချောမွေ့မွေ့အလင်းမှိန်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုအောင်မြင်ရန်ပြင်ပ 1-10VDC တက်ကြွ signal ကို, PWM signal ကို, ဒါမှမဟုတ်ချိန်ညှိခုခံအားဖြင့်ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။
DIP အားဖြင့် selection 1. လူပျိုရုပ်သံလိုင်း output ကို, output ကိုလက်ရှိအဆင့်ကို SW
2. ပံ့ပိုးမှု 3-in-1 အလင်းမှိန်ခြင်း mode ကို (1-10V တက်ကြွ signal ကို, ချိန်ညှိခုခံ, PWM)
220VAC ~ 240VAC ၏ 3. အမြင့် input ကိုဗို့အား
85% အထိ 4. အမြင့်ထိရောက်မှု
5. Built-in တက်ကြွ PFC function ကို
အဘယ်သူမျှမအလင်းမှိန်ခြင်း signal ကို input ကိုပုံမှန် power supply အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ချိန်တွင် 6. 100% အထွက်
8. ကာကွယ်: က Short circuit ကို, ဝန်ကျော်, အပူချိန်ကျော်
ဒါကြောင့်အပေါ်မိုးလုံလေလုံထိုကဲ့သို့သောဆင်းအလင်းကဲ့သို့ LED မီးအလင်းရောင်လျှောက်လွှာ, အစက်အပြောက်အလင်းနှင့်အဘို့သင့်တော် 9.
output ယခု 200mA 250mA 300mA 350mA
ဗို့အား 9-40VDC 9-40VDC 9-40VDC 9-34VDC
စွမ်းအား 8W 10W 12W 11.9W
လက်ရှိတိကျပြတ်သားမှု ± 5%
အဘယ်သူမျှမ Load Output ဗို့အား 50VDC
output LF လက်ရှိဂယက်ထ (<120 Hz) <3%
Power က Factor ≥0.95@230VAC, အပြည့်အဝဝန်
ထိရောက်မှု 85% @ 230VAC, အပြည့်အဝဝန်
THD <10% @ 230VAC, အပြည့်အဝဝန်
no-ဝန် powe စားသုံးမှု <0.5W
Inrush လက်ရှိ အေးက start, 18A (t = width14us 50% Ipeak မှာတိုင်းတာ) @ 230VAC
ကာကွယ်မှု က short တိုက်နယ် အမှားပိတ် output ကိုဖယ်ရှားပြီးနောက် output ကိုလက်ရှိအလိုအလျှောက်ပြန်လည်သက်သာ
Load ကျော် က output ဗို့အား, ကျော်လွန်သွားလျော့ကျခြင်းနှင့်, ဝန်လျှော့ချအခါအလိုအလျှောက်ပြန်လည်သက်သာလာတဲ့အခါ
အပူချိန်ကျော် ပုံမှန် temp.back အခါ output ကိုပိတ်ပစ်အလိုအလျောက်ပြန်လည်သက်သာ။
လုပ်ဆောင်ချက် အလင်းမှိန်ခြင်း 1-10V တက်ကြွ signal ကို, ချိန်ညှိခုခံ, PWM
အခြားသူများက အတိုင်းအတာ 150 * 43 * 29 မီလီမီတာ L ကို * W * H ကို
အလုပ်လုပ်အပူချိန်။ -20 ~ 50 ℃
ဆွေမျိုးစို ~ 90% RH အ 20%
ယခင်: 180-360W 15A * 1ch 12-24VDC Triac မာစတာ Controller
နောက်တစ်ခု: 12-24VDC 15A * 1ch CV ကို 0-10V Dimmer
135W 12VDC 11.25A * 1ch CV ကို 1-10V ယာဉ်မောင်း
PC ကွန်ပျူတာ + 512 * 2ch ကို USB + Ethernet DMX Touch ကို P ကိုတစ်ယောက်တည်းရပ် ...
12-24VDC 6A * 3ch TouchDIM CV ကို Dali ဒီကုဒ်ဒါ